Iindaba - Uyikhetha njani iiglasi kuBume boBuso bakho
Wakha waba nengxaki yokuzama ukufumanisa ukuba loluphi uhlobo lwesakhelo olulungele ubuso bakho? Kulungile unethamsanqa! Ngesikhokelo sethu esincinci, uya kufunda ukuba kukho isakhelo sakhe wonke umntu-kwaye sinokukuxelela ukuba yeyiphi eyona ilungele wena!
Kusenokwenzeka ukuba unayo enye yezi milo zobuso zilandelayo: okweqanda, isikwere, ukujikeleza, intliziyo, okanye idayimane. Ngokujonga esipilini kwaye ujonge inkangeleko yobuso bakho, unokufumana ukuba yeyiphi ehambelana nawe! Funda apha ngezantsi ukuze ubone ukuba ubume bunjani ubuso bakho, kwaye zeziphi iiglasi eziza kujongeka zilungile kuwe.
Zeziphi iiglasi eziMilo eziLungele ubuso obu-Oval?
Zininzi iiglasi ezahlukeneyo ezimelene ne-oval. Ubuso obunemilo embombo okombala bubonisa i-cheekbones eziphakame nangokubanzi kancinci ethe chu ebunzi. Ubume bobuso obude oburhangqileyo buyakuvumela ukuba ususe phantse nasiphi na isitayile- ngakumbi ubukhulu obungaphezulu nobubanzi. Ngokumila kobuso obu-oval, zive ukhululekile ukuba uhambe ngesibindi ngombala omnandi, ubume okanye ubume besakhelo. Isikwere, itrapezoid, ufudo, kunye noxande- amathuba anokuphela!
Ingcebiso yethu ekuphela kwayo kukucoca kude kwizakhelo ezimxinwa kunye nezakhelo ezinobunzima bokuyila. Banokongeza ubude obungenasidingo kubuso bakho obu-oval.
Zeziphi iiglasi eziMele ukuLungisa ubuso beSikwere?
Iindidi ezininzi ezahlukeneyo zeemilo zeglasi zilungele ubuso besikwere. Yinqe ukuba isikwere! Ukuba unobuso obunjengekwere, uninzi lwezibuko ezinkulu zeglasi zinokuthambisa amanqaku akho. Xa kuziwa kwinqanaba, ubuso besikwere babanzi kakhulu emhlathini nasemabunzini. Ngenxa yobume obuchazwe ngumhlathi owomeleleyo, iiglasi ezihlala phezulu empumlweni zongeza ubude obuthambisa obu buso.
Ukutsala ukugxila kwezona mpawu zomeleleyo, khetha ubumnyama kwaye ujikeleze, endaweni ye-angular, isakhelo. Isakhelo segilasi elijikelezileyo liya kuthambeka kwaye longeze umahluko kwiimpawu zakho ze-angular, zenza ubuso bakho bubonakale Iifreyimu ezingenasiphelo kunye ezingenasiphelo ziyindawo elungileyo ukuqala.